Ị nọ na ndepụta egwu: China na-eyi 'ndị na-ekewapụ' Taiwan egwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » Ị nọ na ndepụta egwu: China na-eyi 'ndị na-ekewapụ' Taiwan egwu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye nnọchi anya gọọmentị China, Zhu Fenglian, zipụrụ ihe iyi egwu ọha siri ike nye ndị na-akwado nnwere onwe Taiwan.
China na-eyi ndị isi Taiwan egwu: Ndị na-arara ala nna ha ma na-achọ ikewa mba ahụ ga-enwe njedebe ọjọọ, ndị mmadụ ga-akwarịrị ya ma kpee ya ikpe site n'akụkọ ihe mere eme.
China na-eyi egwu 'ịta ndị na-akwado na ndị na-akwado nnwere onwe Taiwan ntaramahụhụ'.
A ga-amachibido ndị Taiwan 'kewapụrụ' ịbanye n'ime ala, Hong Kong na Macao.
A ga-enyocha 'ndị nkewa' maka ụgwọ mpụ dịka iwu ndị Kọmunist China siri dị.
Onye na-ekwuchitere ụlọ ọrụ ihe gbasara Taiwan nke China nke State Council, na-aza ajụjụ mgbasa ozi gbasara usoro ntaramahụhụ megide ndị na-akwado ya. Taiwan nnwere onwe, mara ọkwa na ndị dị otú ahụ 'separatist ọcha' dị na China's hit list na a 'ga-ata ya ahụhụ' dị ka iwu.'
Onye nnọchi anya gọọmentị China, Zhu Fenglian, zipụrụ ihe iyi egwu ọha na eze Taiwan Ndị na-akwado nnwere onwe, na-adọ aka ná ntị na ndị nọ na listi ahụ, yana ndị ikwu ha, agaghị abanye n'ime ala na mpaghara nchịkwa abụọ pụrụ iche nke Hong Kong na Macao, na ụlọ ọrụ ha jikọrọ aka ka a ga-amachibido ịmekọrịta mmekọrịta ọ bụla na òtù na ndị mmadụ n'otu n'otu na ala ala.
Zhu gbakwụnyekwara na a ga-amachibido ndị na-akwado ha na ụlọ ọrụ ndị metụtara ya itinye aka n'ọrụ ịkpata uru na oke ala, n'etiti ntaramahụhụ ndị ọzọ.
Zhu kwuru, "Ndị na-arara ala nna ha nye ma na-achọ ikewa mba ahụ ga-enwe njedebe ọjọọ, ndị mmadụ ga-akwarịrị ya ma kpee ha ikpe site n'akụkọ ihe mere eme," Zhu kwuru, na-ezo aka na ndị na-akwado ya. TaiwanNnwere onwe, gụnyere onye isi ala Taiwan Su Tseng-chang, onye isi oche nke ndị omebe iwu Yuan Yu Shyi-Kun na onye minista na-ahụ maka mba ofesi Taiwan Joseph Wu.
A ga-ejide ndị nọ na listi ahụ a ga-aza ajụjụ na ndụ ha niile, a ga-enyochakwa ha maka mpụ dị ka "iwu ndị Kọmunist China si dị," Zhu kwukwara.